Bible Mu Nsɛm Efi Israel Hene a Odi Kan So Besi Babilon Nnommumfa So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
Saul bɛyɛɛ Israel hene a odi kan. Nanso Yehowa pow no, na wɔpaw Dawid sɛ ɔhene sii n’ananmu. Yehu nneɛma pii wɔ Dawid ho. Sɛ́ aberante no, ɔne ɔbran Goliat koe. Akyiri yi oguan fii Ɔhene Saul ɔhoɔyawfo no anim. Afei Abigail a ne ho yɛ fɛ siw no kwan wɔ ade bɔne bi a anka ɔrekɔyɛ ho.
Nea edi hɔ no, yesua Dawid ba Salomo a odii Dawid ade sɛ Israel hene no ho nneɛma pii. Israel ahene baasa a wodi kan no mu biara dii hene mfe 40. Salomo wu akyi no Israel mu pae bɛyɛɛ nhemman abien, kusuu fam de ne kesee fam de.
Kusuu fam mmusua 10 ahemman no traa hɔ mfe 257 ansa na Asiriafo sɛee no. Mfe 133 akyi no wɔsɛee kesee fam mmusua abien ahemman no nso. Saa bere yi wɔde Israelfo no kɔɔ nnommumfa mu wɔ Babilon. Enti Ɔfa a Ɛto so ANAN yi ka mfe 510 a nsɛm a ɛyɛ nwonwa pii sisii wɔ mu mu abakɔsɛm.